के सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान अपराध हो ? यसरी सुरु भयो बच्चालाई गराइएको स्तनपानमाथि तिब्र बहस | Rajmarga
के सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान अपराध हो ? यसरी सुरु भयो बच्चालाई गराइएको स्तनपानमाथि तिब्र बहस
एउटा भारतीय म्यागजिनको कभर पुष्ठमा प्रकाशित बच्चालाई दुध खुवाउँदै गरेको तस्वीरका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बहस तिब्र बनेको छ।
भारतको केरलबाट प्रकाशित हुने गृहलक्ष्मी नामक म्यागजिनको कभर पृष्ठमा मोडल गिलु जोसफ बच्चालाई छातीमा टाँसेर दुध खुवाउँदै गरेको देखाइएको छ।
तस्वीरको क्याप्सनमा लेखिएको छ–आमाहरु केरलसँग भनिरहेकी छन्–घोरिएर नहेर, हामी स्तनपान गराउन चाहन्छौ ।
पहिलोपटक यसरी कुनै भारतीय म्यागजिनल ेकुनै महिलाको स्तनपान गराउँदै गरेको तस्वीर कभर पृष्ठमा प्रकाशन गरेको मानिएको छ। तर यी मोडल स्वयम आमा भने होइनन्, यही कुराले असहज स्थिति उत्पन्न गरायो र बहस तिब्र बनेको हो ।
गृहलक्ष्मीका सम्पादकले म्यागजितलाई सार्वजनिक स्थलहरुमा स्तनपान गराउने आवश्यकताप्रति जागरुकता ल्याउन यस्तो तस्वीर प्रकाशन गरेको बताएका छन् ।
मोसी जोसफले बीबीसीसँग भने–एक महिना पहिला, एक जना पुरुषले स्तनपान गराउँदै गरेकी आफ्नी श्रीमतीको तस्वीर फेसबुकमा सेयर गरेका थिए, उनी चाहन्थे कि सार्वजनिक स्थलहरुमा आमाहरुलाई स्तनपान गराउने विषयमा बहस चलोस् । तर एउटा सकारात्मक बहस हुनुको साटो उक्त महिलामाथि पुरुष र महिलाहरुले साइबर बुलिङ गरिदिए ।
‘त्यसैले हामीले स्तनपान गराउने यो मुद्दालाई हाम्रो आफ्नो नयाँ अंकमा उठाउने निर्णय गरेका हौ ।’
भारतमा परम्परागत रुपमा सारी लगाउने कयौ महिलाहरु सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउने गर्दछन् । उनीहरु ब्लाउजको सहयोगमा यसो गर्न सक्छन् । तर जुन महिला सारी लगाउन चाहँदैनन् उनीहरुसँग यो विकल्प हुँदैन ।
कयौले सामाजिक सञ्जालमा म्यागजिन र मोडलको समर्थनमा पोस्ट गरेका छन् । तर, स्तनपान गराउने वास्तवमै आमाको साटो एउटी मोडललाई प्रस्तुत गरिएकोमा आलोचना पनि भइरहेको छ।
ब्लगर अन्जना नयरले एक ब्लग पोस्टमा लेखेकी छन्–बच्चालाई स्तनपान गराउने वास्तविक आमालाई भित्री पृष्ठमा स्थान दिने र एउटा मोडललाई बच्चा र वस्त्रहीन स्तनका साथ कभर पृष्ठमा पेस गर्ने निर्णय सस्तो सनसनी र शोषण हो ।
तर, गिलु जोसफले म्यागजिनमा तस्वीर प्रकाशित गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिन् । उनले बीबीसीसँग भनिन्–मलाई थाहा थियो कि यसका लागि मैले निकै आलोचना झेल्नुपर्नेछ ।तर मैले ती आमाहरुको खुसीका लागि यो निर्णय लिएँ जुन गर्व र स्वतन्त्रतापूर्वक स्तनपान गराउन चाहन्छन् ।
उनलाई उधृत गर्दै एउटा म्यागजिनले भनेको छ–यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउन चाहनु हुन्छ भने कुन चाहिँ भगवान रिसाउनेछ ?
केरलका स्थापित लेखक पाल जकारियाले बीबीसँग भने कि उनलाई लाग्दैन कि यो कभर ‘पाथ–ब्रेकिङ्ग कदम’ थियो । ‘यसबाट सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउने विषयमा कुनै क्रान्ति त आउनेछैन । तर यो महत्वपूर्ण कदम हो । मलाई आशा छ कि यसका लागि सधैंजस्तै सम्पादकले माफी माग्नुपर्ने छैन ।’
सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउनु संसारभर एउटा विवादास्पद मुद्दा हो ।
स्कटल्याण्डमा गरिएको एउटा सर्भेका अनुसार एक चौथाईभन्दा बढी आमाहरुले भने कि उनीहरुले सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउँदा ‘असहज महशुस भयो ।
पछिल्लो एउटा अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि बेलायतमा स्तनपान गराउने दर संसारमै सबैभन्दा कम थियो । मात्र २०० मध्ये एक महिला–वा ०.५ प्रतिशत–एक वर्षपछि केही हदसम्म स्तनपान गराइरहेका थिए । जबकि जर्मनीमा यो तथ्यांक २३ प्रतिशत, अमेरिकामा २७ प्रतिशत, ब्राजिलमा ५६ प्रतिशत, सेनेगलमा ९९ प्रतिशत थियो । बीबीसी हिन्दी
Previous post: भाइबरबाट १० लाख ठग्दा..: योजनाकार पाकिस्तानमा
Next post: दुधको खिर खुवाएर बच्चा पाउने गराउने बिचित्रका खिर बाबा